Wear မြှောင်နှင့်အတူပလတ်စတစ်နှင်းရေမှုတ်များ - တရုတ် Richina
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H320
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 400mm 320
ယေဘုယျအား Length: 1200mm
ပလပ်စတစ်နှင်းရေမှုတ်များ Wear မြှောင်နှင့်အတူ
နှင်းရေမှုတ်များ ဦးခေါင်းအရွယ်အစား 320-400mm, အားဖြည် fibs နှင့်အတူ PP ပစ္စည်းဓါး။
ရေမြှုပ်ချုပ်ကိုင်နှင့်အတူ Powder coated သံမဏိပြွန်လက်ကိုင်နှင့်အတူနှင်းရေမှုတ်များ
နှင်းရေမှုတ်များ Blade ကို များနှင့်ဝက်အူများကချိတ်ဆက်ကိုင်တွယ်။
အာဏာနှင့် tool ကိုဘဝဖြတ်တောက်တိုးမြှင့်ဖို့အကြမ်းခံလူမီနီယမ်အစွန်
(option ကိုလူမီနီယံ / သစ်သား / firberglass လက်ကိုင်ခွင့်ပြု)
စံပြ Poly ရှာဖွေနေ နှင်း Tools များ ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း? ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ အားလုံးအကောင်းဆုံးနှင်းရေမှုတ်များရဲ့အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံများမှာ နှင်းထက်တောင်ဦးရေမှုတ်များ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ဘီးနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာ Duty နှင်းရေမှုတ်များ